SuperTuxKart: ny fomba hamoha ny efijery | Avy amin'ny Linux
Isaac | | Games, Tutorials / Manuals / Tips
Misy fampianarana vitsivitsy amin'ny Internet momba ny fomba hamohana ny làlana mihidy ao amin'ny malaza Lalao video SuperTuxKart. Lalao somary tsotra io, saingy mety hampiala voly an'ireo mpampiasa maro. Fa raha tsy manam-potoana be ianao ary tsy te-hilalao ny fampielezan-kevitra dia hahita fambara maro be voasakana tsy azonao ampiasaina ianao.
Ny tsotra indrindra dia mamoha azy ireo amin'ny alàlan'ny fisie fanamboarana ary amin'izay dia afaka milalao ilay tadiavinao amin'ny fomba maimaimpoana tanteraka, fa tsy mila miandry hahitana ireo teboka ilaina hamaha na zavatra toy izany. Ny olana dia misy mpampiasa maro izay mahita olana mahita ny fisie izay tsy maintsy ovain'izy ireo ary izany no antony nanapahako hevitra hanazava izany ...
Raha fintinina, te hamaha ny làlan'ny SuperTuxKart ianao miaraka amin'ilay kinova 1.1 vaovao, na amin'ny fampiasana izany fonosana haingana, na angamba raha nisintona ny lalao mivantana tamin'ny tranokala ofisialy (.xz fonosana) ianao ary tsy afaka mahita ireo mpilalao.xml izay milaza aminao ny hanovana. Fahamarinana?
Raha izany no anao ary tsy azonao jerena ny ~ / .config / supertuxkart / /players.xml, tsy maintsy manaraka ireto dingana tsotra ireto ianao hamaha ny efijery:
1 Raha nisintona SuperTuxKart-1.1.linux.tar.xz ianao
2 Raha nametraka ilay fonosana haingana ianao
Raha nisintona SuperTuxKart-1.1.linux.tar.xz ianao
Amin'ny tranga fisintomana ny tarball ny fomba manaraka dia ho dingana manaraka:
Sokafy ny terminal.
Miaraka amin'ny baikon'ny cd dia mandehana any amin'ny lahatahiry SuperTuxKart-1.1-linux izay hita taorian'ny famoahana ny tarball.
Ao anatiny dia mila mankany amin'ny lahatahiry data / fanamby ianao.
Ao anaty no ahitanao rakitra maromaro. Ohatra, raha hamaha minigolf.challenge mifanaraka amin'ny làlan'i Minigolf dia mila soloinao ao » "by" ».
Raha tianao dia afaka manao azy ho azy amin'ny rakitra rehetra miaraka amin'ny sed….
Andramo ny SuperTuxKart dia ho hitanao fa novohana io.
Raha nametraka ilay fonosana haingana ianao
Amin'ity tranga ity, toy ny mahazatra raha nametraka azy ianao avy amin'ny repos Ubuntu na avy amin'ny Ivotoerana Rindrambaiko, ny tokony hataonao dia:
Ampiasao ny baiko dia ampiasao ny baiko cd mankany / home / /snap/supertuxkart/341/.config/supertuxkart/
Ao anatiny dia ho hitanao fa misy rakitra antsoina hoe players.xml raha mampiasa ny ls command ianao.
Ny tokony hataonao dia ny manolo ny "tsy misy" rehetra amin'ny "mafy" ohatra. Manokatra ny làlana ity. Azonao atao izany amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity raha tsy misy teny nalaina hoe "sed -i 's / none / hard / g' players.xml".
Tokony hamerina amin'ny dingana faharoa ianao, fa tsy 341 dia tokony hiditra 370 izay manana rafitra mitovy ary manova ity rakitra ity koa. Izany dia / trano / /snap/supertuxkart/370/.config/supertuxkart/ ary ao anatiny no ahitanao ireo mpilalao.xml izay tokony hanovanao ny mitovy amin'ilay teo aloha ...
Ankehitriny ianao dia afaka manandrana SuperTuxKart ary mahita fa novohana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » SuperTuxKart: Ahoana ny famohana ny efijery
Distros azo avy amin'ny iray malaza hafa: Feren OS, Tromjaro ary Lion OS